Qiyaasaha Qubayska, Madaxyada Maydhashada, Golayaasha Maydhashada - Chenpai
alaabada kale ee musqusha
Digsiyo xoqid iyo kaadi
Gacanta birta birta ah
Goynta laser-ka ayaa shaqeeya
shaqaynta farshaxanka birta ah
Kusoo dhawow CHENGPAI
Maaddaama aan nahay soo saare xirfadle ah oo ah biraha birta ah ee birta ah, waxaan bixinnaa alaabada ugu fiican.
Ku soo dhowow nala soo xiriir
Alaabada Chengpai, waxaad kuheli kartaa roobka buufinta cirka ee mugdiga ah si looga yareeyo daalka maalinta si kasta oo aad jeceshahay.
Magaalada Shishan, Degmada Nanhai, Magaalada Foshan, waa magaalo leh nidaam gaadiid oo si habsami leh u socda, awooda labaad ee ugu sareysa uguna sareysa iyo waxsoosaarka ugu sareeya Gobolka Guangdong.
Saddex shaqo madaxa maydhashada
Guddi qubeys ah oo nadiif ah Afarta darbi ee shaqeynaya
LED-ka qasabada birta ee birta ka sameysan
Saqafka sare ee lagu rakibay madaxa qubeyska muraayadaha
Madaxa qubeyska wareega ee leh gacanta showr
Ku takhasusay soo saarista qubayska muddo 10 sano ah, alaabooyinka waxaa loo dhoofiyaa adduunka oo idil.
Chengpai waxay leedahay dhowr shati oo Shiine ah oo loogu talagalay hal abuurka, in ka badan 20 shatiyada Shiinaha ee moodooyinka iyo muuqaalka korantada, iyo in ka badan 10 Guangdong oo ah alaab casri ah oo cusub.
Shirkad isku dhafan oo suuq-geyn ah, Chengpai waxaa loo aqoonsaday inay tahay Shirkad Teknolojiyad Sare oo Qaran, Shirkad Yar oo Dhex-dhexaad ah iyo Tekniyoolajiyad Qaran, Shirkad Guangdong lagu kalsoonaan karo, iyo "shirkad la aqoonsan yahay oo loo yaqaan" ISO9001 "waxayna ku guuleysatay shahaadooyin sharaf badan oo ay ka heshay ururka warshadaha. .
Noocyada Mashiinka Mashiinka
Habka Dayactirka ee Qashin Qubka
Guddi Qubeys VS Madaxa Maydhashada gacanta
No.9 Wadada Zhongzhen, Luocun, Magaalada Shishan, Degmada Nanhai, Foshan City, Gobolka Guangdong, Shiinaha.